IELTS ule nkwadebe | BLI
Nkwadebe UELTS Exam
Jikere maka ọdịnihu gị
IELTS Nkwado Nyocha
IELTS bụ nwale ahaziri mba ụwa nke mmụta asụsụ Bekee. Ọ tụrụ asambodo asụsụ ndị chọrọ ịmụ ma ọ bụ na-arụ ọrụ ebe a na-eji Bekee amụ asụsụ. A na-eji ya maka ebumnuche mmụta, mbata na ọpụpụ na ọrụ. Ebumnuche nkuzi nke IELTS bụ iji nyere ụmụ akwụkwọ aka ịbawanye asụsụ ha ma nweta akara kacha mma maka ule IELTS.
Usoro nkwadebe anyị nke IELTS ga-ewetara gị mmeghe maka nhazi nke nyocha IELTS yana ntughari usoro nke usoro nke ọ bụla. Will ga - amụta ihe ị ga - atụ anya n'oge ule IELTS ma melite akara gị site na omume na nyocha. Jiri ngwa nnwale ihe osise wee nweta nzaghachi n'aka onye nkuzi.
Ihe ọmụmụ anyị pere mpe, na-ekwe ka ị nweta ahụmịhe mmụta ahaziri onwe gị. Ọzụzụ a ga - enyere gị aka ịmata ebe ndị a na - ahụkarị njehie ma nye gị nkà dị mkpa iji zere imeghachi ha na Testbọchị Nnwale.
Ogologo na mmalite ụbọchị
Ogologo: opekata mpe izu anọ
Ezubere akwụkwọ mmụta ahụ iji mee ka ụmụ akwụkwọ mara usoro nke IELTS site na ịtụle ọdịnaya yiri nke ha ga-ahụ na ule IELTS. Klas ahụ ga-elekwasị anya n'inyere ụmụ akwụkwọ aka imeziwanye nkà nke ọ bụla (ịgụ, ide, ige ntị, na ikwu okwu). Studentsmụ akwụkwọ ga-eme ihe site na ịnwale ule ịme ihe na ịmụ usoro na usoro dị iche iche iji nyere ha aka ịkwadebe maka ule ahụ wee nweta akara kacha mma.
Ihe nkuzi = nkeji iri ise
Studentsmụ akwụkwọ na-aga akwụkwọ ga-abụrịrị ọkwa dị elu nke BLI dị ka nke 10. Ọ bụrụ na nwa akwụkwọ erughi ọkwa ahụ achọrọ ka a nabata ya na usoro ịkwadebe IELTS, ha ga-enwerịrị ọmụmụ ihe anyị ruo mgbe ha ruru ọkwa dị elu.
Biko kpọtụrụ anyị maka inweta nkọwa ndị ọzọ gbasara ọnụahịa nkwado anyị.
Mmemme mmemme gụnyere
Ndebanye aha Ndebanye aha
BLI Montreal bụ ebe a na-enyocha ndị mmadụ IELTS. Biko mara na ụbọchị ndị ahụ nwere ike ịgbanwe. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịnwale ule IELTS, ị ga-agbaso usoro ndị ahụ site na ntinye aha ntanetị ma ọ bụ soro onye nnọchite anya BLI kwuo okwu maka ozi ndị ọzọ.
Bọchị ule maka afọ 2020
Ọchịchị ọ bụla amalite ụbọchị
Opekata mpe izu
Izu kacha izu 12